Wariyeyaashii ku xayirnaa garoonka diyaaradaha Kismaayo oo dib Muqdisho loogu soo celiyay - iftineducation.com
Wariyeyaashii ku xayirnaa garoonka diyaaradaha Kismaayo oo dib Muqdisho loogu soo celiyay
iftineducation.com – Wariyeyaal ka howl gala magaalada Muqadisho oo maalin ka hor diyaarad ka dejisay garoonka diyaaradaha Kismaayo ayaa dib Muqdisho loogu soo celiyay, kadib muddo 36-saacadood oo ay ku xayirnaayeen garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Wariyeyaashan oo tiradooda gaareysa 12 ayaa isugu jira kuwa ka howl gala Telefishinada, Idaacadaha iyo Wakaaladaha wararka, waxaana ay ka mid ahaayeen wafdi maalin ka hor laga soo celiyay Kismaayo, kuwaasoo u kuur galayay xaalada magaalada.
Mid ka mid ah wariyeyaasha mudada 36-saacadood ku xayirnaa garoonka oo ah Cameran u shaqeeya Wakaalada Wararka ee AP Faarax Cabdi Warsame ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha Kismaayo muddo ku go’doonsanaayeen, isla markaana loo diiday inay galaan gudaha magaalada.
Mr Warsame ayaa sheegay in shalay gelinkii dambe ay u suura gashay in dib Muqdisho uga soo laabtaan, kadib markii diyaarad loo soo diray, waxaana uu xusay in intii ay ku xayirnaayeen garoonka ay ku sugnaayeen teendho yar oo garoonka ka dhex dhisneyd sida uu yiri.
Wariyeyaashan ayaa arbacadii la soo dhaafay ka mid ahaa wafdi gaaray Kismaayo, oo ka socday dowladda Soomaaliya iyo AMISOM, inkastoo markii dambe Maamulayaasha Kismaayo iyo Ciidamada Kenya ee qeybta ka ah AMISOM ay u diideen inay gudaha u galaan magaalada Kismaayo.
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa gacanta ku haya Ciidamada wada socday ee dowladda Soomaaliya, Raaskambooni iyo AMISOM, iyadoo uu jiro muran ka taagan dhoofinta dhuxusha oo dowladda Soomaaliya ay mamnuucday, isla markaana ka soo horjeeda in la dhoofiyo.